SP SDHC 8GB (Class 4) ::: 365myanmar.com
ပင်မစာမျက်နှာ ကင်မရာ SD ကတ်များ SP SDHC 8GB (Class 4)
SP SDHC 8GB (Class 4)
High capacity and great compatibility
SP CF Card 200X (4GB)
Performance Read(max.): 30MB/s
SP SDHC (UHS-I) 16GB
SP SDHC 32GB (Class 4)
SP အမှတ်တံဆိပ် Class4အမျိုးအစာဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို မြန်နှုန်းမြင့်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သလို အကောင်းဆုံး သိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းခံနိုင်ခြင်း၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်းနှင့် x-ray ကာကွယ်ခြင်းကိုစမ်းသပ် အတည်ပြုထားပါသည်။ အလိုအလျောက်အမှားပြင်ဆင်ပေးသော error correction code (ECC) လုပ်ဆောင်ချက် ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနှင့် ကြာရှည်ခံနိုင်ခြင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SP Widget software ဖြင့်လည်း အချက်အလက်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်တာ အာမခံပေးထားခြင်းကြောင့်လည်း စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Dimensions 24 x 32 x 2.1 mm Storage Temperature ─40°C ~ 85° C
Weight 2g Humidity 8% to 95%
Durability 10,000 insertions (minimum) Warranty Lifetime warranty
MTBF More than 1,000,000 hours Note Some of the listed capacity onaFlash storage device is used for formatting and other functions and thus is not available for data storage. As such, the actual available capacity for data storage is less than what is listed on the products.